Orinasa fanamboarana volo mora vidy sy mpamatsy | Ouzhan
Ny varahina dia firaka varahina misy zinc ho firaka lehibe miampy singa mampifangaro. Ny "totohondry mena" dia dingana fandroahana mafana tokoa.
Varahina vy tsy ferrous forging-namboarina mazava tsara varahina forging faritra
Ny fizotry ny fikapohana mena dia dingana matihanina mandroso izay vao novolavolaina tamin'ny alàlan'ny famolavolana mazava sy maoderina. Miaraka amin'ny fandrosoan'ny fiaraha-monina sy ny fampandrosoana ny siansa sy ny teknolojia, ny indostrian'ny milina dia nametraka fitakiana tanjaka mekanika vaovao ho an'ny faritra mekanika. Ny sehatry ny fampiharana dia misy ny famonoana ny fiaramanidina, ny motera diesel, ny famonoana, ny famonoana amin'ny sehatra samihafa, ny famonoana an-dranomasina, ny famonoana fitaovam-piadiana, ny petrochemicals, ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny famonoana angovo nokleary.
Tombontsoa amin'ny fananganana metaly tsy ferrous varahina
- Hatsarao ny tanjaky ny mekanika
- Ny casting dia manana fahamendrehana avo lenta ary hamafin'ny faritra ambany
- plastika tsara amin'ny hafanan'ny efitrano sy ny maripana avo
- Fampiasana vy be
- Faritra hafanana miakatra; fitondran-tena mafana tsara
Fitsipika fanodinana varahina
1. Aringano ny rafitra fanariana marokoroko, ataovy tsara ny voa, ary tsindrio ny banga madinidinika ao amin'ny banga (hamafiso ny fanakaikezana) hanatsarana ny toetra mekanika sy ny taonany.
2. Fandefasana ny banga amin'ny endrika vokatra isan-karazany miaraka amin'ny fantsom-by.
OEM namboarina varahina tsy ferrous forging fanompoana-China Shanghai varahina non-ferrous vy forging faritra mpanamboatra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Ny forging varahina avo lenta misy kalitao azo antoka sy azo ianteherana dia azo zahana arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana sy ny fiasan-dàlana mahomby dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny volo vy. Ho fanampin'izany, ireo vokatra vita amin'ny varahina izay omena dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana izahay ho an'ny ampahany manamboatra varahina ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy.
Inona no fampiasana ny ampahany varahina sandoka
Ny varahina dia matetika ampiasaina amin'ny fanamboarana valves, fantson-drano, fantsom-pifandraisana ho an'ny rivotra anatiny sy ivelany ary radiatera.
Tombony azo avy amin'ny serivisy fanamboarana varahina Ouzhan
- Ouzhan dia manana sampana fanaraha-maso kalitao manokana, alohan'ny fandefasana azy, hahazoana antoka fa ny vokatra rehetra dia ao anatin'ny faritra misy ny lesoka.
- Fahaiza-mamokatra avo lenta sy vidin'ny fifaninanana.
- Ny vokatra fanamboarana varahina marina rehetra dia iharan'ny fitsirihana kalitao hentitra.
- Ny serivisy OEM express dia afaka miantoka fa mahazo ireo vokatra tadiavina ianao, manohana ny DDP, CIF, FOB ary fomba fandoavam-bola hafa hahazoana antoka fa afaka mandray tsara ny entana ny mpanjifa.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ny faritra forging varahina.
- Ouzhan dia manana milina fanodinana mihoatra ny am-polony, serivisy fampidirana, tsipika famokarana mahazatra, ary miaraka amin'ny fanamarinana ara-pitaovana sy ny tatitry ny fitsapana ny vokatra.
Previous: Plastika mihodina amin'ny CNC
Manaraka: OEM mihodina vy mihodina faritra namboarina
Namboarina vy vy sandoka faritra mechani ...
Foring faritra vy vy